देउवा र प्रचण्डको गोप्य भेट, प्रधानमन्त्री विरुध्द सहकार्य गर्ने सहमति
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवावीच सरकारको गुप्त तयारी विरुध्द एक भएर अघि बढ्ने सहमति भएको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई चुनौति हुनसक्ने ठानेर दाहाल र देउवाविरुध्द गम्भीर कदम चाल्न लागेको थाहा पाएपछि उनीहरुले सहकार्य गर्ने सहमति गरेको थाहा भएको छ ।
कमजोर हुँदै ओली
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अवस्था बारिहबाट हेर्दा असाध्यै बलियो तर नियालेर हेर्दा भीरको चीण्डोजस्तो उँधो न उँभो देखिन्छ । ओलीको साथमा प्रचुर जनसमर्थन देखिन्छ, यही कारण उनी बलियो देखिएका हुन् । तर, भित्री रुपमा हेर्दा ओलीको सातोपुत्लो उडेको बुझ्न गाह्रो छैन, उनी आतंकित छन् । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सत्तारोहणको छटपटीले नै हो ओलीलाई निरीह बनाएको,अरु ठूलो कारण छैन ।
कतिपयले ओलीलाई विगतका राजा महेन्द्र जत्ति नै शक्तिशाली पनि भनेका हुन् । शक्तिशाली हुनुको कुनै खास मापो हुन सक्दैन । तर ओली इतिहासकै लोकप्रिय प्रधानमन्त्री थिए तर अब भने अवस्था बदलिएको छ । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाको त के वर्णन गर्नु, लोकप्रियताको सीमा नै थिएन । अहिले पनि उनको लोकप्रियता छँदैछ तर उनकै अविश्वसनीय अभिव्यक्तिले आफैं कमजोर हुँदै ओरालो लागेको छ उनको लोकप्रियता ।
यति लोकप्रिय भएर पनि ओली किन असाध्यै कमजोर छन् ? किन आतंकित छन् ? यसको जवाफमा एउटा शब्द या नाम लिए पुग्छ– ‘प्रचण्ड’ । अहिले नेपाली जनताले देखिरहेको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओलीको पदीय प्राण प्रचण्डको हातमा छ ।
चतुर दाहाल संकटमा
पूर्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड धुरन्धर राजनीतिक खेलाडि भएकोमा शंका छैन । व्यापारमा घाटा पनि हुन्छ तर राजनीतिको व्यापारमा प्रचण्डले आजसम्म कहिल्यै पनि घाटा ब्यहोरेको देखिँदैन । जस्तै जोखिम मोलेर पनि राजनीतिक नाफा हासिल गर्दै आएका छन् । यही कारण प्रचण्डले आजको हैसियतका आर्जन हुन् ।
पूर्व एमाले भनेको सम्पूर्ण रुपमा केपी ओली मात्र होइनन् । अरु पनि छन्, ओलीले जे भन्यो त्यही हुने अवस्था छैन पूर्व एमालेमा । तर, पूर्व माओवादी केन्द्रको अवस्था फरक छ । प्रचण्ड भनेकै पूर्व माओवादी र पूर्व माओवादी भनेकै प्रचण्ड हुन् । अहिले दुइजना अध्यक्षका वीच यही शक्तिको रापतापको लडाईं देखिन्छ सत्तामा आलोपालोको बहसमा ।
सर्वशक्तिमान मानिएका प्रधानमन्त्री ओली यतिबेला पार्टीभित्रका प्रतिपक्षी जस्ता देखिएका दाहाल र संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई एकैसाथ सन्तुलनमा ल्याउने रणनीति बनाईरहेको बुझिएको छ । यी दुइ नेतालाई मित्रवत् तरिकाले भन्दा पनि तह लाउनैपर्ने पक्षसँग गरिने व्यवहार अपनाएर ठेगान लाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओेलीले तयारी गरिरहेको जानकार सूत्रले बताएको छ ।
ओलीको यस्तो चाल थाहा पाएका दाहाल र देउवा भने एकठाउँमा जुट्न थालेका छन् । सरकारका तर्फबाट द्वन्दकालीन मुद्दा उठाएर दुवैजनालाई कानूनी झमेलामा अल्झाउने कुटिल चाल चालिन लागेको सुँइको पाएपछि दाहाल र देउवा गत बिहीबार ललितपुरको समीट होटलमा छलफल गर्न बसेका थिए ।
उनीहरुको बुझाईमा सरकारले जस्केलाबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न खोजिरहेको छ । नेदरल्याण्डको हेग पुगेर तत्कालीन माओवादीद्वारा सञ्चालित सशस्त्र द्वन्द्वमा बाल सैनिक लेनिन बिष्टले माओवादीनेतृत्वमा रहेका नेताविरुद्ध उजुरी दिनुमा सरकारकै सहयोग रहेको सूचना दाहाल र देउवाका कानमा परेको समाचार सूत्रले बताएको छ । यसका लागि तत्कालीन एमालेनिकटका केही कानुन व्यवसायी र एमालेनिकट रही काम गरिरहेका केही गैरसरकारी संस्था (गैसस) को बिष्टलाई सहयोग रहनुले पनि प्रधानमन्त्रीसँग दाहाल र देउवा झस्किनुको मुख्य कारण रहेको बताईएको छ ।
पार्टीभित्र र बाहिर पनि चर्को आलोचना र विरोध भैरहेका बेला अध्यक्ष ओलीनेतृत्वको सरकारले द्वन्द्वकालका मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिकरण गरी दाहाल र देउवासँग राजनैतिक प्रतिशोध साँध्न खोजेको बुझेपछि उनीहरु एकभएर अघि बढ्ने तयारीमा लागेको कांग्रेस सम्बध्द सूत्रले बताएको छ ।
सरकारी रवैया बुझेर तर्सिएका दाहाल र देउवाले शान्तिप्रक्रिया अझै नटुंगिएको निष्कर्ष निकाल्दै ठोस कदम चालेर अघि बढ्ने सहमति गरेको बुझिएको छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई निष्कर्षमा नपु¥याउँदा मूलधारमा आइसकेका नेतालाई समस्या आएको भन्दै नेताद्वयले यसमा गम्भीरताका साथ काम गर्नुपर्ने कुरा महसुस गरेको बताईएको छ ।
नेताद्वयबीच शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा नपुग्दा पर्ने अप्ठ्याराबारे छलफल केन्द्रित भएको दाहाल निकट सूत्रले बतायो । शान्तिप्रक्रियाका मुख्य दुई पक्षको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइराला र आफूले लिएकाले टुंगोमा पु¥याउन आफूलाई साथदिने देउवासँग आग्रह गर्दै दाहालले कोइरालाको निधनपछि देउवाको काँधमा जिम्मेवारी आएकाले मिलेर जान छलफल गरेका थिए । त्यसक्रममा देउवाले मिलेर जान आफूले वातावरण बनाउँदा किन धोका दिएको भनी दाहालसँग प्रश्न गरेका थिए । आफूलाई धोका दिँदा दाहालले पश्चात्ताप गर्नुपर्ने समय आउन लागेको भन्दै देउवाले गुनासो पनि गरेको सूत्रले बताएको छ । (फायल तस्बिर)
२०७६ असार २२ आइतबार १३:०४:०० मा प्रकाशित